Amakhasino ama-3 Ahamba phambili ku-inthanethi anokuhlangenwe nakho okuhle komsebenzisi - Amakhodi weBhonasi Yekhasino aku-inthanethi
Yasungulwa yi-NRR Entertainment Limited ngonyaka ka-2014, iSlotty Vegas Casino inemidlalo engaphezu kwe-100 nemidlalo ekunikezelweni ngayo; bonke banikezwe abathuthukisi be-software abanjengoMicrogaming neNetEnt. Le khasino eku-inthanethi ilayisensiwe yiMalta Gaming Authority neKhomishini Yezokugembula yase-United Kingdom. Enye yezinzuzo ezinkulu ukuthi inokukhethwa okuhle kwemidlalo yasekhasino ebukhoma, kufaka phakathi izinguqulo zakamuva ze-blackjack ne-roulette.
Amakhasino angama-888 anikezwe ilayisense yiKhomishini Yezokugembula yase-UK neGibraltar Regulatory Authority. Le khasino ewina umklomelo inikela ngamabhonasi amaningi, ukukhuphula kanye nezinhlelo ezihambelana nabadlali bayo. Izinsimbi zamahhala zinikezwa bobabili abadlali abasha nabakhona. Kungakhathaleki ukuthi ukhetha okudlalayo ne-bankroll, kuzoba nokuthile okuthokozisayo ku-888 Casino.
Amakhasino angama-888 anikezela ngaphezu kwama-200 Slots, anikezwe yi-WMS neNetEnt. Uma ungathandi Slots, ke ungazama imidlalo yayo yetafula. Eminye yemidlalo yetafula engcono kakhulu i-roulette, i-blackjack, i-video poker ne-baccarat. Uhlu lwezinketho zebhange olutholakalayo nalo lukhulu kakhulu. Isibonelo, ungafaka noma ukhiphe imali usebenzisa i-MasterCard, i-Visa, i-Skrill, i-PayPal noma i-e-wallet. Imali iyashesha, futhi ukuhoxisa kuthatha izinsuku ezi-1 kuye kweziyi-5.
Ithiphu: uma uvela eMelika, thola Imihlahlandlela ehamba phambili yekhasino e-USA lapha.
Yasungulwa ngonyaka ka-2016, i-ShadowBet Casino ingenye yalawo makhasino ambalwa aqinisekisa isipiliyoni somsebenzisi esihle. Iphatha izikhala ezivela kuMicrogaming, Betsoft, neNetEnt. I-ShadowBet yaziwa kakhulu ngezinhlelo zayo ezithuthukayo ze-jackpots kanye nezinhlelo ezihambelana nazo. Imidlalo engaphezu kwe-500 okwamanje iyatholakala, futhi izinhlobo ezintsha ze-blackjack ne-roulette zingezwa kwiThala leencwadi isikhashana. Ikhasino linikeza iVisa, MasterCard, Skrill, Neteller nePayPal njengezindlela zokuqala zokukhokha.
Uhlu lwamakhasino aku-inthanethi aphambili angaphezu kokuqedwa, kepha ama-888 Amakhasino, ama-ShadowBet Casino, kanye ne-Slotty Vegas Casino aphuma esixukwini ngenxa yokukhetha kwawo imidlalo, izindlela eziningi zokukhokha nezinye izakhiwo. Lawa makhasino athola izibuyekezo ezinhle ezivela kumakhasimende awo. Siphakamisa ukuthi ufunde izibuyekezo zabo ngokucophelela futhi uqhathanise ukunikezwa kwabo kwebhonasi nemidlalo.